ရေညှောင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆောင်းခိုငှက်မျိုးဖြစ်သော ရေညှောင့် နှုတ်ဝိုင်းငှက် (ခေါ်) ဒီလုံးငှက် (Spoon-Billed Sandpiper)သည် မြန်မာနိုင်ငံ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေတွင် ကျက်စားသည့် ကမ္ဘာ့ရှားပါး ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးရောင်းချ ခံရခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကောင်ရေတစ်ထောင်ခန့်ပင် မကျန်ရှိတော့ဟု Birdlife International အဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားသည်။
ရေညှောင့် နှုတ်ဝိုင်းငှက်သည် မိုးဥတုအခါ ရုရှားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်း ချူကိုတာ ပြည်နယ်တွင် သားပေါက်ပြီး ဆောင်းတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌ လာရောက် ဆောင်းခိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တို့တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်းငှက်ကို ၂၀၀၈-ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လေ့လာသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကောင်ရေ ၅၀၀ လောက်သာ ကျန်တော့သည်ဟု ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (BANCA)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာထင်လှက ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေညှောင့် နှုတ်ဝိုင်းငှက် အဓိကကျက်စားရာနေရာမှာ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ ဒေသ ဖြစ်သည်။ 
The bill from the side and above
↑ BirdLife International (2018). "Calidris pygmaea". IUCN Red List of Threatened Species 2018. IUCN.
↑ ကမ္ဘာပေါ်၌ အကောင်ရေ ၅၀၀ အောက်သာ ကျန်ရှိသော မျိုးသုဉ်းလုနီး ရေညှောင့်နှုတ်ဝိုင်း (ဒီလုံးငှက်) ထက်ဝက်ခန့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်းခိုရန် ဝင်ရောက်လေ့ရှိ။ Eleven Media Group (18 December 2017)။ 18 March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့တွင် ဆောင်းခိုငှက် အရေအတွက် ပိုများလာ။ The Myanmar Times (18 February 2015)။ 25 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေညှောင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်&oldid=711625" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။